Yangon +959 797299991-5, Mandalay +959 797299996-7
ကျွန်တော်တို့ Two Birds Manufacturing Co.,Ltd ဟာ(1997)ခုနှစ်တွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ကံသာယာမြို့သစ်မှာတပိုင်တနိုင်အိမ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနှင့်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြရင်း မှန်ကန်တဲ့စေတနာ၊ကောင်းမွန် သောအရည်အသွေး တို့ကြောင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်လာပြီး(1999)ခုနှစ်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်း အသွင်သို့ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာသည့်နှင့်အမျှ သုံးစွဲဝယ်ယူ ရောင်းချသူများ အဆင်ပြေနိုင်စေရေးအတွက်(2001)ခုနှစ်မှာအရောင်းကားဖြင့်ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
(2003) ခုနှစ်တွင် အထက်မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတွင်အရောင်းရုံးခန်းတစ်ခုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ထိုသို့ရောင်းချခဲ့ရာတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိလာသောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် Two Birds Manufacturing Co.,Ltd အမည်ဖြင့်( 2004 )ခုနှစ်မှာကုမ္ပဏီလိုင်စင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့ပြီး ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ ထို့ အတူ စက်ပစ္စည်းအင်အားများပြားလာပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတိုး တက်လာမှုများကြောင့်ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံများ၊စက်ရုံအဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ( 2008 ) ခုနှစ်တွင် စားသုံး သူများနှင့်ဝယ်ယူရောင်းချသူများရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုများကြောင့်စက်ရုံလည်ပတ် မှု အရှိန်ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပြီးစက်ပစ္စည်းများဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုကူးပြောင်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ဈေးကွက် နှင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာမှုများကြောင့် ဝန်ထမ်းဦးရေ (200) ကျော်အထိ(2010)ခုနှစ် တွင်ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်များအရ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရရှိနိုင်အောင် အရှိန်အဟုန် မြှင့်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အထက်မြန်မာပြည်တခွင်မှာ အောင်မြင်မှုနှင့်ထောက်ခံချက်ကောင်းများရရှိလာတဲ့အတွက် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်အတွက် (2011)ခုနှစ်တွင်အောက်မြန်မာပြည်ဈေးကွက်အတွက်ရန်ကုန်တိုင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းတွင် အရောင်းရုံး ခွဲတစ်ခုကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်,အရည်အသွေးပြည့်မှီသောကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ခြင်းကြောင့်ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် နေရာတခုကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့ပြီးဈေးကွက်အင်အားနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် (2012) ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်တွင်အဆင့်မြင့်စက်ရုံသစ်ကိုစတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်,2014 ခုနှစ်မှာတော့ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံရှိ အရောင်းရုံးခွဲအား ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်ရှိစက်ရုံဝန်းအတွင်းထဲသို့ အပြီးပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်၊ (2015)ခုနှစ်မှာ ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်ရှိ စက်ရုံသစ်အားစတင်လည်ပတ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
စားသောက်ကုန်တခုအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော ထောက်ခံချက် လက်မှတ်တခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြု (ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် FDA ) ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်၊ ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းအရည်အသွေးမြှင့်တင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် မန္တလေးမြို့ရှိ အသေးစားစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုများကို ရန်ကုန်စက်ရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်၊(2017) ခုနှစ်မှာတော့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ နည်းပညာဖြင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပုံစံများအား နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ( HACCP ) ရယူနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ (2018) ခုနှစ်မှာ ILO မှ Kaizen Consultant 5S SCORE,Training ပြုလုပ်ပြီး အဆင့်မြင့်မြင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်အောင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
No.(470/471), Myawadimingyi Street, Shwe
Lin Ban Industrial Zone, HlaingTharYar Township,
No.13 (A), 59 Street, Between Manawhari
Street & AungSan Street, kanTharYar, ChanMya
TharZi Township, Mandalay, Myanmar.
© Copyright 2018 Two Bird Manufacturing Co.,Ltd All Rights Reserved.